Man United oo sidii looga bartay Arsenal karbaashtay +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United oo sidii looga bartay Arsenal karbaashtay +SAWIRRO
Kooxda Man United ayaa guul weyn kusoo gaartay garoonka Emirates cayaar ay 3-1 ku raquuseen Arsenal.
Kulankaan Jese Lingard aya labo gool dhaliyay halka Paul Pogba casaan la siiyay sidoo kalena goolhaye David De Gae ayaa bad baadin taariikhi ah sameeyay asigoo Arsenal kubada ka gurbiyay.
Valencia iyo Lingard ayaa Arsenal goolal weerar celis ah kaga naxsadeen 10-ka daqiiqo ee cayaarta kulan macain Arsene Wenger laga yaabsaday.
Antonio Valencia ayaa daqiiqadii 4-aad Man United hogaanka u dhiibay waxaana goolka caawinaad ka geestya Paul Pogba.
Arsenal oo isla qabsanin waxaa dharbaaxo ugu sii daray Jesse Lingard daqiiqadii 11-aad 2-0 ka dhigay ayadoo kubad weerar celis ah Arsenal lagu gaaday waxaana caawinaad ka geestay Martial.
Macalin Wenger nidaamkiisa 10-daqiiqo ayuu ku bur buray waxaana Arsenal dhaawac kaga baxay Mustafi ayadoo lagu badalay Iwobi.
Arsenal ayaa dib usoo noolaatay qaybaha dambe ee cayaarta halka Man United waab gashay si ay goolashooda u ilaashtaan.
Lacezette ayaa qoriga Man United ku dhuftay halka Sanchez, Bellerin, Klosanic iyo Ramsey dhamaan ku dhawaadeen inay shabaqa soo taabtaan balse goolhaye De Gae ayaa geesiga garoonka noqday qaybihii dambe cayaarta.
Waxaa qaybtii hore la aaday xili Arsenal kubada ku gacan sareesay balse Man United shaqadeeda qabsatay waxaana lagu kala nastay 2-0 kulan xiisahiisa aad u sareeyay.
Macalin Wenger xidigahiisa cadaadiska ayay kusii wadeen qaybta labaad cayaarta marka la isku soo laabtay waxayna la imaadeen goolkii ay u baahnaayeen.
Lacazette ayaa cayaarta 2-1 ka dhigay daqiiqadii 49-aad kubad Sanchez uu daafacyada Arsenal ka dul qaaday kadibna Ramsey si dagan saaxiibkiis Lacazette ugu baasay xili uu wajiga goosha United hortaagnaa mana celin karin goolhaye De Gae darbadii Lacazette.
Man United ayaa hogaanka fogeesan kartay kadib markii kubad weerar celis ahayd Lingard qoriga goosha ku dhuftay daqiiqadii 52-aad waxaana Arsenal la siiyay digniin inay daafacooda xajistaan.
Isla markiiba Alex Iwobi darbad xogan waxa ka celiyay Mr. Bad baadiye De Gae daqiiqadii 53-aad.
Bad baado kale oo waali ah ayuu halmar sameeyay goolhaye De Gae asigoo darbad xoogan ka celiyay Lacazette oo xerada ganaaxa ku jiro kadibna Sanchez ayaa kubada ku celiyay markii ay soo laabatay laakiin De Gae ma ahan nin dabac lugta ayuu ku celiyay kubadii lagu soo celiyay!
Arsenal waa la gaaday waxay kubada wareejiso waxaa wadnaha jareen Lingard iyo Pogba kubad weerar celis ah Lingard ayaa Pogba u dhiibtay wuxuuna Pogba sameeyay asigoo xerada ganaaxa ku jiro inuu Koscielny soo dar daro xeeladna kusoo maro kadibna Lingard ayuu siiyay goosha oo cidlo ah wuxuuna ka dhigay 3-1 daqiiqadii 63-aad.
Macalin Mourinho ayaa cayaarta soo galiyay Ander Herrera daqiiqadii 67-aad si uu khadka dhexe u xoojisto wuxuuna badalay Martial.
Tababare Wenger isagana wuxuu garoonka ka saaray Xhaka wuxuuna keenay Welbeck si Arsenal weerar dheeraad ah usii qaado.
Paul Pogba ayaa ku istaagay Hector Bellerin daqiiqadii 76-aad wuxuuna garsoore Marinan siiyay xidigaan casaan toos ah madaama u si adag ugu istaagay Bellerin!
Mourinho oo aan rabin in kooxdiisa culees weyn lasoo saaro madaama 10-cayaaryahan noqdeen wuxuu badalay Lingard asigoo keena Darmain.
Sidoo kalena Wenger wuxuu keenay Giroud asigoo garoonka ka saaray Kolašinac isla daqiiqada 76-aad.
Man United daafac ayay gashay si ay goolasheeda u ilaashato waxayna xidigaha Arsenal ku fashilmeen inay darbiga Man United jebiyaan.
Cayaarta waxa lagu daray 5-daqiiqo balse Arsenal waxba kuma keenin halka Man United oo 10-cayaaryahan ah baskooda la moodi waayay waxayna cayaarta kusoo idlaatay in Man United 3-1 guusha ku qaadatay.
Man United guusha ay gaartay waxay kaga dhigan tahay inay booska labaad EPL fadhiso ayadoo leh 35-dhibcood 15-kulan ay cayaartay waxayna 5-dhibcood ka hooseydaa Man City oo kulan baaqi u yahay.
Arsenal guuldarada ku dhacday waxay sababtay in kaalinta 5-aad u dhacdo waxayna leedahay 28-dhibcood ayadoo cayaartay 15-kulan waxaana soo idlaatay 13-kulan xariir ah Arsenal garoonkeeda Emirates ku badineesay kulamada EPL.